नुवाकोटमा २८ हल गोरु जुधाइँदै, यसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
नुवाकोटमा २८ हल गोरु जुधाइँदै, यसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन
२०७४ पुस २९ शनिवार
नुवाकोट, पुस २९ । नुवाकोटमा हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष पनि माघे संक्रान्तिमा २८ हल गोरु जुधाइने भएको छ । जिल्लाको तारुका र बेत्रावतीमा प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिमा गोरु जुधाउने गरिन्छ ।
तारकेश्वर गाउँपालिका–२, तारुकामा यो वर्ष १८ हल गोरु जुधाइने भएको छ । मेला आयोजक समितिका अनुसार तारुकामा माघे संक्रान्तिमा जुधाउनका लागि किसानले १८ हल गोरु दर्ता गराएका छन् ।
मेलामा विजेता गोरु धनीलाई रु पाँच हजार र प्रमाणपत्र तथा उपबिजेतालाई रु तीन हजार पुरस्कार तोकिएको छ । तारुकाका विभिन्न स्थानमा गोरु जुधाएर मनोरञ्जन लिने परम्पराबाट २०६२ सालदेखि चन्दनीको बारीको ठूलो पाटोमा व्यवस्थित रुपमा गोरु जुधाउन थालिएको हो ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१०, बेत्रावतीमा पनि गोरु जुधाउने तयारी पूरा भएको छ । यो वर्ष गोरु जुधाउनका लागि १० हल गोरु दर्ता भएको आयोजक गोसाइँकुण्ड युवा क्लबका अध्यक्ष सुरज लबटले जानकारी दिए ।
उदयपुर मा छुट्टाछुट्टै दुर्घटना मा २ को मृत्यु
लागुऔषध बोकेर नेपाल प्रवेश गरेका तीन युवक पक्राउ
आज दशैंको सातौ दिन, घर–घरमा फूलपाती भित्राइदै
धनगढीमाईमा एक किशोरको शव फेला
ताेकिएभन्दा यती थाेरै तलब पाउछन् सेक्युरिटी गार्ड
२०७५ असोज ३० मंगलवार
सासंद ठेकेदारदेखि सहन्यायाधिवक्तासम्म अख्तियारको फन्दामा, को को पर्दैछन जेलमा ?
यसरी मनाउँदैछन् शीर्ष नेताले दशैँ
लोक सेवा आयोगले गर्याे शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन, कुन जिल्लाबाट कतिजना ?
२०७५ असोज २९ सोमवार
प्रदेश नं ३ का सांसदले गरे सह्रानिय काम
२०७५ असोज २८ आइतवार
वडा अध्यक्षले गरे पत्रकारमाथि चक्कु प्रहार
प्रधानमन्त्री ओलीले यतिसम्म भने पूर्वराजा शाहलाई !
महिनावारी हुदा कसरी गर्ने यौन सम्पर्क, प्रत्येक पुरुषले जान्न पर्ने १० तरिका
माधव कुमार नेपाल पक्षका दुई जना नेता मन्त्री पाे !